COMPLEX(RealNum; INum; Dursoo)
n gatii safartuu madalii tokkoo irraa gara gatii madalii safartuu itti aanuu gara birooti jijjiira . Madaalliwwan safartuu akka barruu mallattoo waraabbiti ykn akka wabiiti qixa sirriin galchi. Yoo madallii safartuu man'ee keessaa galchiee, Fakkeenyaaf, gara xiqaa 1 (salphaa) man'ee galchuuf mallattoo hudhaa ' battaluma tokkootti (1) aansudhaan galchi.
Safartootni odeeffannoo "biitii" and "baayitii" kan armaan gadii keessaa tokkoon durfamu dursitoota IEC 60027-2 / IEEE 1541:
lakkoofsi lakkoofsa jijjirame dha.
SafartuuIrraan safartuu jijjiramni irraati adeemsifamuudha.
GaraSafartuun safartuu jijjiramni irraati adeemsifamuudha.
Firii isaa loogariizimii lamee lakkoofsa konphileeksiti.
IMPRODUCT("lakkoofsa konphileeksii"; "lakkoofsa konphileeksii1"; ...)
Firii isaa ida'ama hanga 29 lakkoofsa konphileeksiti.
IMSUM("lakkoofsa konphileeksii1"; "lakkoofsa konphileeksii2"; ...)